Virtual Box - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
18-10-2009, 05:06 AM
ကျနော် virtual machine တွေ အကြောင်းလိုက်ဖတ်ရင်း ကနေ ကြိုက်တာလေး တွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် သုံးကြည့်ပီးဖြစ်လို့ စိတ်ချ လိုက်ချ သုံးဖို့
virtual machine နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တော်တော်များများ ရင်းနှီးပီး ဖြစ်နေပါပီ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်လေ့လာမိသလောက် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ် ဆိုရင် ခု ကျနော် တင်ပေးမယ့် virtual box ထက်မြှင့်တာ ဆိုလို့ IBM က ထုတ်တဲ့ z/VM တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော် တို့ သုံခဲ့ဖူးတဲ့ vmware ထက်ပိုကောင်းပါတယ်။ အားသာချက်တွေ အများကြီးထဲက ကျနော် ကြိုက်နှစ်သက်တာလေးတွေ ကို ရွေးပြောရမယ်ဆိုရင် ...
အင်တာနက်အတွက် ပူစရာမလိုဘူး။ VM ပေါ်မှာ OS တင်ပြီးတာနဲ့ အဲဒီ OS မှာ ချက်ခြင်း Net ရနေပါပီ။
နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ ကတော့ နေရာ သိပ်မယူပါဘူး။ သူရဲ့ feature ထဲက Dynamically expanding storage ဆိုတာပါပါတယ်။ အဲဒီ option ကို သုံးမယ်ဆိုရင် OS တစ်ခုအတွက် GB ဘယ်လောက်မှ မလိုဘူးဆိုတာ သိရမှာပါ။ ကျန်တာတွေ ကတော့ဗျာ ကလိချင်တဲ့ သူတွေ အတွက် အရမ်းကောင်းပေါ့။ VM ပေါ်မှာ ကိုယ်ကလိ ချင်တဲ့ OS ကို တင်ပြီး ကြိုက်သလို ကလိပေမယ့် မူလ Host OS ကို လုံးဝ မထိခိုက်တဲ့ အတွက် ကလိစရာ တစ်ခုခုများ ပေါ်လာပီဆိုရင် အဲဒီလို တင်ပြီး ကလိရတာ စိတ်အေးပါတယ်။ ကျနော် တို့ Linux ခွေတွေ စစမ်းကြတုန်းက boot ပြဿနာတစ်ခုခု တတ်သွားပြီဆိုရင် မူလ သုံးနေတဲ့ Window ကိုပါ ပြန်တင်ရပါတယ်။ နှစ်ခုလုံး ပြန်တင်ရတာပေါ့။ အခြေအနေမဟန်လို့ စတင်ခါစ ရွေးတာမှားသွားရင်လဲ Data တွေ ပါတတ်ပါတယ်။ အဲဒီ ဒုက္ခတွေ လဲ ဝေးသွားတာပေါ့ဗျာ။ စဉ်းစားမိလို့ နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ ကတော့ virtual ကိုပဲ ကောင်းကောင်းသုံးတတ်သွားမယ် ငွေကုန် အချိန်ကုန် လူပင်ပန်းသက်သာတဲ့ အပြင် စမ်းချင်တာကို ရဲရဲစမ်းသပ်နိုင်လို့ နည်းပညာ လေ့လာနေသူတွေအတွက် အများကြီး အထောက်အကူပြုပါကြောင်း ...
ကျနော်လဲ လက်ရှိသုံးနေတာဖြစ်လို့ ဒီနေရာလေးမှာ ပဲ သုံးကြည့်ပြီး အဆင်မပြေတာလေးတွေ ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေးကြပါစို့ဗျာ နောက်တစ်ခု ပြောချင်တာကတော့ အတု ကတော့ အတုပါပဲ။ အတု ကောင်းလွန်းအားကြီးနေရင် အစစ်ကိုတောင် ဝေခွဲရ ခက်သွားတတ်ပါတယ်။ အစစ်လောက်တော့ ...
DOS, OS/2, MS Windows, GNU/Linux, OpenBSD, FreeBSD, NetBSD, Netware, Solaris , Mac OS X ... etc
Latest Virtual Box ( 75.52 MB )
Direct Download ->> http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
1. VirtualBox Installation
2. How to install Ubuntu 9.10 in VirtualBox
3. How to Install Windows7on VirtualBox
4. How To Install And Use Virtualbox For Linux
5. VirtualBox Install with Buyer Brown
Last edited by bonge; 18-06-2011 at 06:17 AM.. Reason: လင့်ထပ်ဖြည့်
အောက်ပါအသင်းဝင် 36 ဦးတို့မှ bonge အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစံငြိမ်း, ကိုဘွဲ, ကိုဖြိုးငြိမ်း, ဆန်းမောင်, နိုင်လင်းစိုး, ပုထုဇဉ်, မိုးလွင်, မိုးကောင်းကင်, မျိုးဟန်ထက်, လမ်းပြကြယ်, လူမုန်း, ဝင်းအောင်, သက်တန့်, သက်နိုင်, ကျော်ထက်ချိန်, ဇော်ရဲပိုင်, နေသစ္စာ, မောင်ရိုး, မောင်ပေါ်ဦး, ငြိမ်းချမ်း, ဖြိုးယံလေး, amaung344, arkaraung, bagothar85, g00gle, hellboy, ko lin, ko myo, kyaukphyu, LaMike, maJunior, mickelnge, phyomyintthein, tu tu, viva, zo
ပြန်စာ - Virtual Box
ူLink no 1.http://ifile.it/onqgkfd က file expired ဖြစ်နေကြောင်းပါခင်ဗျာ.....
24-01-2010, 09:48 PM
တည်နေရာ: Monitor အရှေ့မှာ :P
ပို့စ်5ခုအတွက် 21 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကို bonge ကျေးဇူးပါပဲ... ။
ကွန်နက်ရှင်းလည်း ရပါတယ် ။
အဆင်ပြေပါတယ် ။ ပေါ့လည်းပေါ့တယ် .. မဆိုးဘူး ။
[SIZE="4"][COLOR="SeaGreen"][marquee]ဘာအလုပ်မှ လွယ်ကူတာမရှိပါဘူး ။[/marquee]
[marquee]ကိုယ့်ကြိုးစားမှုကြောင့်သာ လွယ်ကူသွားတာဖြစ်တယ် ။[/marquee][/COLOR][/SIZE]
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ကိုရင်သာဝ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ကိုရင်သာဝ
ကဲ Latest မှ သုံးချင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ညီကိုမောင်နှမတွေ အတွက် အသစ်ထပ်ထွက်လာရင် ဒီမှာ ပဲ ဆက်တင်ပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း သတင်းကောင်း
VirtualBox-3.1.2-56127-Win ( 71.510 MB )
virtualbox-3.1_3.1.2-56127_Ubuntu_karmic_i386.deb (43.47 MB)
အသုံးပြုပုံကတော့ Window OS တွေ အတွက်ဆို အပေါ် ကအတိုင်းပါပဲ။ Ubuntu ဆိုရင်တော့ Command နဲ့ပေါ့ဗျာ။
စစ်တွေသားချေ, ဆန်းမောင်, ပန်းသီးလေး, မုန်းလေး, မိုးလွင်, မိုးကောင်းကင်, ဇော်ရဲပိုင်, g00gle, phoetharlay
19-02-2010, 03:00 AM
ကျနော် ကိုဘိုငယ်ပေးထားတဲ့ virtual box နဲ့ ubuntu ကိုစမ်းတင်တာ အဆင်ပြေပါတယ်ဗျာ
ကျနော်သိချင်တာက အဲဒီ virtual box မှာ တင်ထားတဲ့ ubuntu ပေါ်မှာထပ်ပြီး ဆော့ဝဲတွေတင်ကြည့်ပြီး
စမ်းချင်တယ်ဗျာ application software တွေပေါ့ အဲဒါရပါ့မလားဗျာ ရရင်virtual boxထဲက ubuntu ဘယ်လိုလုပ် တင်ရမယ်ဆိုတာ ညွှန်ကြားစေချင်ပါတယ် ဥဘန်တုပေါ်မှာ သုံးလို့ရတဲ့အပလီကေးရှင်းဆော့ဝဲအမျိုးအစားတွေက သက်သက်တည်ရှိတာလား အဲဒါလေးလဲသိချင်ပါတယ် ပြီးတော့ command။ လင်းနစ်မှာ ကွန်မန်းတွေက မသိမဖြစ်လို့ သိရပါတယ် အဲဒါဘယ်နေရာတွေမှာ ဘယ်လိုရိုက်ထည့်ရတာလဲဗျာ
လင်းနစ်နဲ့ပက်သက်လို့ နကန်းတလုံးမှ မသိပါဘူး
စိတ်ဝင်စားလို့ ဗာကျူရယ်ဘောက်မှာ တင်ပြီး စမ်းကြည့်ခါစပဲရှိပါသေးတယ်
19-02-2010, 04:35 AM
Ubuntu ပေါ်မှာ တင်ဖို့ သက်သက် software တွေ ရှိပါတယ်။ အင်တာနက်လည်းရနေမယ် software ရဲ့နာမည်လဲ သိမယ်။ အဲဒီ software လဲ ရှိနေမယ် ဆိုရင် အောက်က command လေးနဲ့တင် အတော်ပြည့်စုံနေပါပြီ။
ဥပမာ - sudo apt-get install wine(တင်ချင်တဲ့ soft နာမည်ပေါ့)။
အကိုက ဒီထဲက အကြောင်းအရာတွေ ဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ ဒီထဲက လင့်တွေ မညွန်းတော့ပါဘူး
အစ်မတူးတူး ညွန်းပေးခဲ့ဖူးတဲ့ အောက်က ဆိုဒ်များကို သွားပြီး လေ့လာကြည့်ပါခင်ဗျာ
Linux မှာ command ကို ကောင်းကောင်းနားလည်မှ အဆင်ပြေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုတော့ Linux မြန်မာလိုတွေ အများကြီး ထွက်လာပါပြီ။ အောက်ကလင့်မှာလဲ ရှိပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ bonge အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆန်းမောင်, မိုးလွင်, မိုးကောင်းကင်, ဇော်ရဲပိုင်, g00gle, hellboy, ko myo, kyaukphyu, sky4ster, tu tu
14-03-2010, 10:27 PM
အကိုေ၇ virtual box ပေါ်မှာ windows7ကို ကျနော်တင်တာ
FATAL:No bootable medium found!System halted. လို. ပြနေတယ်
ကျနော် windows7ကို http://www.myanmarfamily.org/forum/s...ad.php?t=18498 က
အကို စစ်တွေသားချေ တင်ပေးထားတဲ့ဟာကို ဒီဗီဒီ နဲ့ ဘန်း ပြီး dvd drive (E) ထဲမှာထဲ့တာပါ
။ဖိုင်ကတော့ ISO ပါ။ ဘာမှားနေလဲမသိဘူး ။ virtual box ကို အခုမှ စသုံးဘူးတာ ။
အားနာသော်လဲပဲ ထပ်ထပ်ပြီး ကူညီပါဦးလို့ ............................ရှဲ့ရှဲ့....ရှဲ့ရှဲ့............
15-03-2010, 06:32 AM
ဟဲလို ကိုtzero ရေ
တိုင်ပတ်နေပြီလား အဆင်ပြေမှာပါဗျာ။ စိတ်မညစ်ပါနဲ့ဗျာ အဆင်ပြေမှာပါ အဲဒီ Error က အကိုခွေ မထည့်လို့ (သို့) ခွေထည့်သော်လည်း First Boot ပေးမထားလို့ (သို့) အောက်က ပထမဆုံး ပုံမှာလို CD/DVD-ROM Device ပေးထားရဲ့ လားဗျ။
အပေါ်က ပုံ မှာဆိုရင် ပထမဆုံး တင်မယ့် hard disk ဆောက်တဲ့ အဆင့်ပြီးတာနဲ့ ဒုတိယ အဆင့်မှာပေါ့။ Virtual Machine ကို Start နှိပ်ပြီး ခွေရွေးတဲ့ အချိန်မှာ ဖြစ်တာပါ။ ကျနော် ခွေနဲ့ တင်မယ်ဆိုရင် အပေါ်က အတိုင်းလုပ်ပေးပါ။ BIOS ထဲက first boot ကိုလဲ CD/DVD ပေးခဲ့ပါ။ ခု အပေါ်က ပုံအတိုင်းလဲ အနီဝိုင်းထားတဲ့ နေရာမှာ check ပေးထာပြီး အောက်က Medial Source မှာ အကိုရဲ့ CD/DVD drive ကိုရွေးပေးပါ။ တင်စရာ device မရှိလို့ အဲဒီ Error ပြတာပါ
အဲလိုမှ မဟုတ်သေးရင် အကို window7ဖိုင် ISO ပဲလေ။ အပေါ်မှာ ပြထားတဲ့ ဒုတိယ အနီဝိုင်းကို နှိပ်ရင် အောက်က ပုံပေါ်ပါတယ်။ အောက်က ပုံအတိုင်းပေါ်ပြီးဆိုရင် Add ကိုနှိပ်ပြီး အကိုရဲ့ ISO ဖိုင်လေး ရွေးပေးလိုက်ရင် ပြီးသွားပြီဗျ။ ဒါဆို အဲဒီ Error မပေါ်တော့ဘူး။
ကျနော် ရှင်းပြတာမှ နားရူပ်နေအုန်းမယ်ဗျာ။ ထုံးစံအတိုင်း အောက်က Tutorial ဖိုင်လေး ကြည့်လိုက်ဗျာ။ အဆင်ပြေ ပီသာမှတ်လိုက်တော့
How to Install Windows7on VirtualBox 14.9 MB
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ bonge အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စစ်တွေသားချေ, စိုင်းနေဇင်, မိုးလွင်, မိုးကောင်းကင်, လမ်းပြကြယ်, ဇော်ရဲပိုင်, g00gle, hellboy, phoetharlay, tu tu, zo
ပို့စ် 25 ခုအတွက် 46 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
How to Install Windows7on VirtualBox 14.9 MB ကို ifile.it ကနေပြန်တင်ပေးပါလားခင်ဗျာ..ကျွန်တော့်ဆီကဒေါင်းမရလို့ပါ...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်..
Find More Posts by စိုင်းနေဇင်
အလုပ်များလှသော အစ်ကိုကြီး ဘိုငယ်ကို မဖြစ်စလောက်လေး ဝင်ကူညီတဲ့အနေနဲ့ ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ thurein အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စစ်တွေသားချေ, ဇော်ရဲပိုင်, bonge, g00gle, phoetharlay, zo
ကျေးဇူးပါ အဆင်မပြေသေးလို. ထပ်ရှုပ်ပါ၇စေ
Failed to open the CD/DVD image D:
Could not open the medium 'D:
VD:error VERR_VD_RAW_INVALID_HEADER opening
လို.ပေါ် နေ တယ်။ကျနော် လောင်(ဗန်း) ထားတဲ. iso file က တခုခု မှားနေလားမသိ
ကျနော် ၇ိုးရိုး dvd burner နဲ. လောင်လိုက် တာ။စိတ်ရှုပ်အောင်လုပ်သလိုဖြစ်နေပြီ
ကိုဗိုလ်ငယ် မရှိတာနဲ့ ဝင်ဖောလိုက်ဦးမယ်ဗျ
အခွေဘမ်းပြီးတာတောင် iso လို့ပေါ်နေလို့လေ..ဖိုင်တစ်ခုအနေနဲ့ အခွေထဲမှာ သိမ်းလိုက်သလိုပဲ ဖြစ်သွားတယ်ထင်တယ်
ပြန်ဘမ်းကြည့်ပါဦးဗျ..ဒီတစ်ခါတော့ Nero Burning rom သုံးကြည့်လိုက်ပါလား
ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ .iso ဖိုင်လေးပေါ်ကို R-Click ပေးပြီး Open with Nero burning rom ဆိုရင် အဆင်ပြေတယ်ဗျ
ဇော်ရဲပိုင်, arkaraung, bonge, zo
နီ၇ိုက full version နဲ.မှ လား ။ trial version နဲ. ၇နိုင်မလား။
25-03-2010, 02:52 AM
Trail နဲ့တော့ စမ်းမကြည့်တော့ သိဘူးဗျ..ရလောက်မှာပါ
Trail အစား ဒီအောက်ကကောင်တွေနဲ့ ဆိုရင်ကောဗျ..စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦး
ဒီ ကောင်လေးကတော့ portable လေးပါ
ကိုညီနေမင်း တင်ထားတဲ့ကောင်ကိုဒေါင်းလို့ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်အောက်မှာယူလိုက်ပါ..
အစ်မတူးတူးရေ ကိုညီနေမင်းရဲ့ပို့စ်ကို အဲ့ဒီလင့်ခ်လေးပေါင်းပေးလိုက်ပါဦးဗျ
bonge, thurein, tu tu, zo
အစ်ကို ကျွန်တော်က CD/DVD-ROM Device ပုံထဲမှာ မပါဘူးဗျာ။ အခုဆော့ ဝဲကလဲ ပုံစံမတူလို့ အစ်ကိုနဲနဲ ပြောပြပါဦး။အစ်ကိုပုံထဲမှာတွေ့ တာဒီင်္လို
ပြိီးတော့ New ကနေ Virtual Machine ကွိုရွေးတဲ့ အချိန်မှာ ဒီိလိုပေါ်နေတယ်အစ်ကို
နောက်ဆုံးကြိူးစားကြည့် တာ အောက်ကပုံကလို ဖြစ်သွားတယ်
30-08-2010, 02:06 AM
Originally Posted by ဝင်းအောင်
ညီလေး Version နိမ့်နေတာ
ညီပုံထဲမှာ ပါတယ်လေ။ Host CD/DVD Drive မှာ ညီလေး ခွေထည့်ထားတဲ့ Drive ကို ရွေးပေးလိုက်လေ။ (သို့) ညီက iso ဖိုင်နဲ့ တင်မှာ ဆိုရင် အောက်မှာ ISO Image File ဆိုတာ ရှိတယ်နော်။ အဲဒါကို check ပေးပြီး Browse လုပ်ဖို့ ဘေးနားက ကောင်လေးကနေ ညီလေး window7iso ဖိုင်ကို ရွေးပေးယုံပါပဲ။
အဲလို ဖြစ်တာက အရင်တစ်ခေါက်ညီလေး window7ဆိုပြီး စမ်းထားတာ ရှိလို့ သူ file name ရှိနေလို့။ C -> Documents and Settings -> User -> .VirtualBox -> HardDisks မှာ ကြည့်လိုက် ရှိနေတယ်နော်။ ဖျက်ပြီး တင်လဲ မရဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူက VirtualBox XML Document ထဲမှာပါ လိုက်ပြင်ပေးမှ ရမယ်။ အဲတော့ ရူပ်သွားမယ်။ နာမည် အသစ်ပေးလိုက်ပေါ့ win7ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့
ဒီပုံက ပထမဆုံးမှာ Drive (သို့) ISO ဖိုင် ရှိတဲ့နေရာ မှန်အောင် မထားခဲ့လို့ installation ဆက်လုပ်လို့ မရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမပုံမှာ ပေးတာမှန်ရင် ရပါပြီ။ နောက်ပြီး နာမည်ပြောင်းပေးလိုက်ပေါ့။ အဲဒါဆိုရင် အားလုံး အဆင်ပြေပါပြီ။
မိုးလွင်, ဇော်ရဲပိုင်, ဖြိုးယံလေး, g00gle, hellboy
ကိုဗိုလ်ငယ်ကြီး ပျင်းနေတော့မယ်.. ဖြေရှင်းပေးစရာလေး တစ်ခုတော့ ပေါ်လာပြီဗျို့ ဆေးညွှန်းကောင်းတော့ သောက်တာ သိတဲ့ အတိုင်းပဲ.. အစာမကြေဖြစ်ချင်နေတယ်ဗျာ.. ကြည့်ကြည့်ပါအုံး အောက်က ပုံတွေကို... window loading files ထိပြီးသွားပြီ start windows လဲကျရော အောက်ကအတိုင်းတွေ ဖြစ်နေတော့တာပါပဲဗျာ ကိုဗိုလ်ငယ်ကြီး အားမှပါ..
နောက်တစ်ခု machine ထဲသွားတော့လည်း အောက်ကလိုပေါ်နေတယ်..
နောက်တစ်ခု virtual box ထဲပြန်သွားတော့လည်း အောက်ကလိုလေး
အဲဒါတော်တော်ကြာတယ် ကျနော်ဒီအတိုင်းထားထားတာ တစ်ညလုံးကြာတာတောင် အဲ့အတိုင်းပဲ.. အဲဒါကြောင့်ပါ ကျနော်အလျင်မလိုဘူးနော်.. စမ်းရတာ ဝါသနာပါလို့ပါ ကျနော်တင်လိုက်တဲ့ iso file က ကိုကျောက်ဖြူတင်ထားတဲ့ ဒီပို့စ် က ဝင်းဒိုး အလန်းလေး .. ကျနော့်စက်လေးကအကျိုးပေးတယ်ထင်ပါ့ ကျနော်စမ်းသမျှ အခုထိ ဒူပေနာပေခံတုန်းပဲ.. ဟိုတစ်ခါ ပြဿနာလေးကလွဲရင်ပေါ့ ကိုယ့်ဆရာတွေ မမေးဖြစ်တာလည်း ကြာပြီမလား ကိုကေဇက်တော့ မျက်ခုံးလှုပ်နေလောက်ပြီ ဒီပို့စ်ကိုမြင်ရင်
ကိုhellboy ရေ ပြန်စာ နောက်ကျနေတာ စောရီးပါခင်ဗျာ ...
သူများပိုစ်တွေချည်းပဲ အာရုံစိုက်တာများပြီး ကိုယ်ပိုစ်မှာ မေးထားတာ ခုမှတွေ့မိတော့တယ်
ကျနော် PM ပို့ပြီး မေးထားတဲ့ ထဲက iso ဖိုင်လည်း ဟုတ်တယ်။ window install လုပ်တုန်းက အဆင်ပြေခဲ့မယ် ၊ virtual box မှာ setting တွေလဲမှန်မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေ ...
window အားလုံးတင်ပြီးမှ ဖြစ်တာ ဆိုရင်တော့ ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိတာ ဖြစ်တတ်တာ တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ Disk မထုတ်ပေးလို့။ ကျနော်တို့က Disk နဲ့ တင်တာ မဟုတ်တော့ iso ဖိုင် လမ်းကြောင်းကို ပြောင်းပေးရပါမယ်။ iso ဖိုင်လမ်းကြောင်းကို ပြောင်းမပေးရင်လဲ window မတတ်ဘဲ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အောက်က ပုံမှာလို့ အကိုတင်ထားတဲ့ V Box ပေါ်က Window မှာ Devices -> CD/DVD Devices -> မှာ iso ဖိုင် မဟုတ်ဘဲ Host Drive (or) တခြား တစ်ခုခု ပြောင်းရွေးပေးလိုက်ပေါ့။
အဲဒီပုံအတိုင်း လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ အဲလိုမှ မရသေးရင်တော့ ... ကျနော်ဒေါင်းပြီး စမ်းတင်ကြည့်ပေးပါမယ်။ အဆင်ပြေ မပြေ PM ပေးပါ ။ အဆင်ပြေရင် မတင်ကြည့်တော့ဘူးလေ ...
လမ်းပြကြယ်, ဇော်ရဲပိုင်, arkaraung, g00gle, hellboy, KznT
13-09-2010, 02:17 AM
ကို Boung ရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ....
နောက်ထပ်လည်း ကောင်းကောင်းလေးတွေ တင်ပေးပါဦး
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: May 2013
OS တစ်ခုပေါ်တွင် Virtual Box VM်ကိုဒေါင်းလုပ်ခြင်းနှ
OS တစ်ခုပေါ်တွင် အခြား OS တစ်ခုကို အသုံးပြုလိုပါက Virtual Memory ကို အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့ virtual memory software ကတော့ Virtual Box VM ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို
https://www.virtualbox.org/ အခုလင့်လေးကနေပီးတော့ သွားရောက်ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ ဘောက်ထဲက Downloads ဆိုတာလေးကို ကလစ်ပီး ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ။ OS နဲ့ကိုက်မယ့် software ကိုဒေါင်းလိုက်ပါ။ ဒေါင်းပီးရင်တော့ Double click နှိပ်ပီး ရမ်းလိုက်ရင်ရပါပီ။ သူ့ကို run တဲ့နေရာမှာ။ internet ကို ချိတ်ဆက်ထားလို့မရပါဘူး။ သူက အကုန်လုံးကို check လုပ်ပီး OS အတုတစ်ခု ပွားပေးတာမို့ပါ။ အဲဒါလေးကို ရမ်းပီးရင်တော့ OS တစ်ခုအတိုင်းပါပဲ။ နက်ပြန်ချိတ်လိုက်ရင်။ အဲဒီ Virtual box ထဲမှာလည်း နက်ကချိန်ပီးသားဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
အခုမှကျွန်တော်ဒီဆိုက်ကလေးကိုစ၀င်ပီး စတင်တာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် ဓာတ်ပုံမတင်တတ်သေးလို့ ဓာတ်ပုံမပါသေးပါဘူး။ ကျွန်တော်ပို့လေးမှာအမှားပါခဲ့လျှင် ဝေဖန်အကြံပြုဆွေးနွေးပေးပါ။ အခုမှစသုံးသည့်အတွက်ကြောင့် တစ်ခြား အမှားပါခဲ့လျှင် ခွင့်လွှတ်ပါလို့တောင်းပန်ရင်း....
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ februaryzeal အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဇော်ရဲပိုင်, pannuko, tu tu
Find More Posts by februaryzeal
Ubuntu တစ်ခုအား download လုပ်ချင်းနှင့် Virtual Box VM တွင် install လုပƟ
ကျွန်တော်တို့ ပထမဦးစွာLinux(Ubuntu) တစ်ခုကို ယခုလင့်လေးမှ download ဆွဲလိုက်ပါ့မယ်။ http://www.filecluster.com/downloads/Ubuntu.html အဲဒီဆိုက်ကလေးညာဘက်တွင် External Mirror1 ဆိုတာလေးကိုကလစ်လိုက်ပါ အော်တိုဒေါင်းလုပ်ကျသွားပါလိမ့်မယ်။ ပြီးလျှင် save ချင်တဲ့နေရာကိုရွေးပီး။ download လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင်ကျွန်တော်တို့ run ထားတဲ့ Oracle VM VirtualBox Manager ဆိုတဲ့ shout cut ကလေးကို double click ပေးပီးဖွင့်လိုက်ပါ.
ပြီးလျှင်တော့ New ဆိုတဲ့ ဟာလေးကိုကလစ်လိုက်ပါ။ New box ထဲမှာ Name နေရာမှာတော့ Ubuntu ဆိုတာလေးကိုရိုက်လိုက်ပါ။ Type နေရာမှာတော့ linux ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပါ။ version ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ အောက်ကိုပြထားတဲ့မြှားလေးကိုနှိပ်ပီး Other windows ကိုရွေးလိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် Next ဆိုတာလေးကိုကလစ်ပါ။ အဲဒီမှာ virtual memory ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီတိုင်းတာတဲ့ဟာလေးကိုဖိနှိပ်ပီးတော့ ကိုယ်ထားချင်တဲ့memory size ကိုထားပေးပါ။ ပြီးရင် Next ကိုလစ်ပေးပါ။ ပီးလျှင်တော့ Create ကို ကလစ်ပါ.ပြီးလင် Hard Drive file type ဆိုတဲ့နေရာမှာ မိမိနဲ့ကိုက်မယ့်ဟာလေးကိုရွေးပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ iso image disk နဲ့တင်မှာဖြစ်လို့ VDI လေးကိုရွေးပါတယ်။ ပြီးရင် Next ကလေးကို ကလစ်ပေးပါ။ ပီးလျှင် Storage on physical hard dirve မှာ။ ကြိုက်တာလေးကိုစာဖတ်ပီးရွေးပေးပါ။ ပီးလင် Next ကိုကလစ်ပေးပါ။ ပြီးရင် ကြိုက်နှစ်သာရာပုံလေးကိုရွေးပီး။ အောက်က hard drive မှာနေရာယူမယ့် size ကို ရွေးပါ။ ပြီးလျှင် Create ကို ကလစ်ပေးပေးပါ။ ပြီးသွားဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ Oracle VM VirtualBox Manager မှာ အသုံးပြုဖို့ အတွက်နေရာလေးတစ်နေရ ရသွားပီပေါ့။ ပြီးရင် အဲဒါလေးကို select ပေးပီ။ အစိမ်းရောင်မြှားလေး (start) ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ နှိပ်လိုက်ပီဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော့် ဒေါင်းထားတဲ့ image file location နေရာလေးကိုတောင်းပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါက ကျွန်တော်တို့ ubuntu ကို install မလုပ်ရသေးတဲ့အခါမှာပေါ့။ လုပ်ပီးရင်တော့ မတောင်းတော့ပါဘူး။ အဲဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ folder ပုံလေးထဲကနေ မိမိသိမ်းထားတဲ့ image file ကိုရွေးလိုက်ပါ။ ပီးလင် install လုပ်နိုင်ပါပီ။
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ februaryzeal အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဇော်ရဲပိုင်, bonge, pannuko, tu tu
software guide, software howto, virtual box
Windows အရှိန်အဟုန်ပိုကောင်းစေမယ့် Virtual Memory လှည့်ကွက်များ poekaunglay87 အထွေထွေဗဟုသုတ 1 10-10-2010 10:19 PM
Virtual PC နှင့် PC Network ချိတ်နည်းသိလိုပါတယ် ယဉ်ဌေး Network ပိုင်းဆိုင်ရာ 12 06-08-2010 06:16 PM
Virtual Memory ၏ တန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ခြင်း komyo2010 ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာတိုလီမုစများ010-01-2009 12:53 PM
How to auto clean virtual pages ကိုဖြိုးငြိမ်း ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာတိုလီမုစများ022-07-2008 05:55 AM